Matin’ny Fahasemporana Tao Anatin’ny Kontenera Kamiao Ny Mpifindra-monina 15 Ahiahiana Ho Tsy Manana Taratasy Tany Zambia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2016 6:52 GMT
Tao anatin'ny kamiô kontenera toy ity iray ity ireo Etiopiana. Sary ho an'ny rehetra: Klever.
Nanaitra ny mpiserasera tao Zambia ny vaovao fa maty tao anaty kôntenera-nà kamiao teo akaikin'ny faritanin'ny Luapula ao amin'ny firenena ny Etiopiana miisa 19.
Taorian'ny tranga voalaza ho anisan'ny halatra fanondranan'olona nitohy vakana, nifoha tamin'ny andiana sary nanaitra tamin'ny aterineto ireo Zambiana izay mampiseho faty maro miparitaka teo amin'ny toerana fantatra amin'ny anarana hoe ‘Pedicle Road’ mampitohy an'i Luapula ao Zambia sy ny faritanin'i Copperbelt any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo.
Tovolahy avokoa ireo rehetra niharam-boina.
Araka ny Muvi TV sy ZED Corner, nentina tamin'ny kamiao iray avy any Tanzania ny Etiopiana 73, ary nafindra tao anaty kôntenera-nà kamiao tatỳ aoriana izay nitondra kitapo-tsaramaso sy trondro.
Tsy nanana lalan-drivotra ilay kamiao vaovao.
Matetika any Zambia no làlana ampiasain'ireo Etiopiana rehefa hanandrana ny ho any Afrika Atsimo izy ireo.
Noahiahiana ho Somaliana ireo lehilahy tamin'ny voalohany. Kanefa nanoratra tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Muvi TV ireo Somaliana mipetraka ao Zambia fa tsy ry zareo ireo ;
Feno vaovao diso ny Muvi TV, tsy mandeha amin'ny kôntenera ny Somaliana, Etiopiana ireo ovay moramora ny fanambaranareo
Namaly ny Muvi TV ( tambajotra fahitalavitra tsy miankina ao Zambia) :
Tsonga avy amin'ny polisy no nalainay
Nanamafy ny governemanta taty aoriana fa Etiopiana ireo lehilahy ireo.
Noting the mixed reporting and lack of information about the incident, one reader of the Lusaka Times, writing under the pen name House Fly, asked the following questions:
Nanamarika ny tatitra mampihazohazo sy ny tsy fahampian'ny famotopotorana momba ny zava-nitranga ny mpamaky iray ao amin'ny Lusaka Times, ary nanoratra tamin'ny alàlan'ny solon'anarana House Fly, ka nanontany toy izao :
Tatitra tena ratsy. Nanao trafika avy any Tanzania, nefa Zambiana ilay fiara. Iza ilay mpamily, ary aiza izy? Inona no nolazain'ny polisy? Azo antoka ve ny tatitra kawti kubuta? [ampangain'ny mpamaky ny mpanangom-baovao ho tsy ampy fahamatorana amin'ny tatitra].
Izany no vokatry ny kolikoly. Ahoana no fomba niampitany sisintany? Iza no namela ireo Alshababs tao anaty kamiao feno tsaramaso?
Nandre tabataba ny olona, ​​ka aiza ireo sisa velona? Nisy ve ny antsafa natao tamin'ireo sisa velona? Iza no efa naiditra hopitaly tamin'ireo sisa velona? Iza no nanala ny akanjon'ireo olona maty ary nahoana? Mpangalatra?
Nanazava ny antony nampitanjaka tapany ireo niharam-boina ny mpamaky iray nampiasa ny anarana Beira;
Ny olona izay namonjy azy ireo voalohany no nanala ny akanjony nefa efa tara loatra
Naneho ny alahelony ireo mpaneho hevitra maro;
Tena mampalahelo izany, malahelo aho mahita ny rahalahiko afrikanina mijaly toy izao! Enga anie ny fanahiny hahita Fiadanana Mandrakizay
Nilaza ny sasany fa noho ny toekarena mahantran'ny kaontinanta no antony tranga mampalahelo :
Mahatsiravina izany. Nahoana i Afrka no ampifandraisina amin'ny zava-dratsy toy izany. Raha tsara ny toe-karena ary afaka hireharehana ny fitantanana, dia afaka manavitsy ireo loza mahazo ny olombelona isika. MTDSRIP
Mandritra izany etsy andaniny, dia fanararaotra iray izany ho an'ny Zambiana sasany hampitandremana ireo mpiray tanindrazana aminy ny amin'ny herisetra mifandraika amin'ny fifidianana izay kasain'ny sasany hatao rehefa hifidy amin'ny 11 Aogositra ny firenena .
Nanamarika i Jevson Phiri :
Lesona ho an'ny Zambiana izany fa mila tony isika aloha, mandritra sy aorian'ny fifidianana, fa raha tsy izany dia hiara-miaina ny zavatra toy izany isika rehefa very ny filaminana ary hanomboka hivadika ho mpitsoa-ponenana ho any amin'ny firenena hafa hitady filaminana. Aoka isika tsy handray ny fiadanana ho toy ny fanomezana!